मनाइयो पाँचतले मन्दिरको जन्मोत्सव! « AayoMail
मनाइयो पाँचतले मन्दिरको जन्मोत्सव!
2020,23 June, 6:16 am
भक्तपुरको प्रसिद्ध न्यातपोल (पाँच तले मन्दिर) को सोमबार जन्मोत्सव मनाइएको छ। मन्दिरको सबैभन्दा माथिल्लो पाँचौं तलाको गजुरमा झन्डोत्तोलन गरेर जन्मोत्सव मनाइएको हो।
झन्डोत्तोलन बर्सेनि असार शुक्ल प्रतिपदाको दिन गरिन्छ। यो दिन न्यातपोल मन्दिरको सबैभन्दा माथिल्लो तला (गजुर) सम्म मानिसले झण्डा राखेर झन्डोत्तोलन गरिएको हो। यस दिनलाई यहाँ स्थानीयहरू न्यातपोँलया बुसाँरा भन्छन्।
बर्सेनि असार शुक्ल प्रतिपदाको दिन बुसाँरा (झन्डात्तोलन) गरिन्छ। यसमा भक्तपुरका तुछिमलाका अवालहरू सलंग्न हुन्छन्। उनीहरूले मन्दिरको माथिल्लो तल्लाको गजुरमा पुगेर झण्डा हाल्छन्।
यसका लागि आधा दर्जन मानिस गजुरसम्म पुग्छन्। मन्दिरको भित्रभित्र हुँदै उनीहरू गजुरसम्म पुग्छन्।
परम्परादेखि चल्दै आएको यो चलन आर्थिक अभावका कारण सञ्चालनमा समस्या भएको छ। स्थानीयका अनुसार वर्षमा एकपटक झन्डोत्तोलनका लागि सरकारले ४ हजार रुपैयाँमात्रै दिँदै आएको छ। सरकारले दिने त्यति रकमले परम्परा धान्न नसकिने गुनासो सरोकारवालाहरूको छ।
तुछिमला टोल सुधार समितिका अध्यक्ष हरिशरण अवालले बुसाँराका लागि २० जना अवाल मन्दिरमा जाने गरेको बताए। कार्यक्रमका लागि आर्थिक अभाव भएकोबारे उनीहरूले गुठी संस्थान भक्तपुरका साथै भक्तपुर नगरपालिका र वडा कार्यालयलाई जानकारी गराएका थिए।
संस्कृतिविद् ओम धौभडेल न्यातपोल मन्दिर निर्माण सम्पन्न भएको अवसरमा झन्डोत्तोलन गरिने चलन चलेको बताउँछन्। नेपाल सम्वत् ८२२ पौष शुक्ल नवमीमा न्यातपाेल मन्दिरकाे जग राखिएको थियो।
मन्दिरको छाना बनाउने काम तुछिमलाका अवालले गरेकोे किम्बदन्ती छ। न्यातपोल मन्दिर एउटाको मात्र नक्सा रहेको धौभडेल बताउँछन्।
टौमढी टोलका भैरव डरलाग्दो, रिसाहा र घमण्डी भएकाले उनलाई शान्त पार्न भैरवको अगाडि सिद्धिलक्ष्मी स्थापना गरिएको मानिन्छ।
मन्दिरलाई अग्लो बनाउनुका कारण भैरवनाथभन्दा ठूलो मन्दिर बनाएपछि भैरवनाथको रिस कम हुन्छ भन्ने धारणा पाइन्छ। सिद्धिलक्ष्मी देवतालाई तान्त्रिक देवता, शक्तिकी देवी र प्रतीक मानिने परम्परा छ।